En vente actuellement 26/10/2018
Archive du 26/10/2018
Dite hafakely, mampiakatra ny tosi-drà diso latsaka…
Zava-doza ho an’ny fahasalamana ihany koa ny filatsahan’ny tosi-dra ho ambany loatra. Ho an’ireo izay manana olana amin’ny tosi-dra mora milatsaka dia hanampy azy ireo ny dite amin’ny romarin.
Voatery tsy maintsy nofoanana ny seho tokony notanterahin’i Justin Timberlake
1. tao amin’ny Madison Square Garden, any New York ny alakamisy lasa teo. Tapaka mantsy ny “corde vocale” an’ity mpihira ity ka tsy navelan’ny mpitsabo hihira aloha izy.
Mba tsy ho voasarika any an-kafa izy…ireto atao!
Rehefa ny fifankahazarana sy ny fiarahamonina fotsiny sisa no manjaka eo amin’ny olon-droa dia mety tsy hanintona ny lehilahy intsony ny vehivavy. Ny olana dia mety ho voasarika any an-kafa izy, izay manaitaitra azy kokoa, amin’ny lafim-piainana maro. Inona ary no vahaolana ?
Fraomazy soja na « tofu » amin’ny legioma
Akora ilaina · Fraomazy soja 350g (ilay “bloc” lehibe iray iny) · Brocoli 1 · Sakay mena 1 · Karaoty 2 · Tongolo maitso tahony 4 · “champignons de Paris” 8 · Tongolo gasy hasiny 3 · Tavim-boanio 1 boaty · “Curry” 2 sf · Menaka 2 sf · Ravina bazilika · Saosy soja 6ml · Sira sy dipoavatra
30 taona … ireo fahazarana 8 tokony atao amin’izay !
Ivon’ny fahatanorana sy ny hery ny faha-30 taona. Miova manaraka izany koa ny endrika sy bika, ka raha tiana hateza ela ny hatsarany, dia mila koloina manomboka eo amin’io taona io.
Entanina hanao fitiliana ny Chlamydia ny vehivavy tanora ao Frantsa
Mangataka sy manentana ireo tanora vehivavy ao Frantsa ny fahefana avo ho an’ny fahasalamana na ny Haute Autorité de Santé ao an-toerana, mba hanao fitiliana ny otrikaretina Chlamydia.
Te hividy sambo hipetrahan’ireo mahantra i Ken Capron, miliardera amerikanina
Maniry ny hividy sambo lehibe iray ao Portland, ilay mpandraharaha amerikanina, Ken Capron. Tiany hamboarina izy ity mba hipetrahan’ireo olona tsy manan-kialofana any an-toerana.
Olona 40 no namoy ny ainy vokatry adim-poko tany Somalie
Olona maherin’ny 40 no namoy ny ainy vokatry ny adim-poko tany Somalie, ny talata lasa teo.
Vehivavy 23 taona aho, miaraka amina lehilahy manambady.
Milaza amiko izy fa hisaraka amin’ny vadiny, nefa tsy mbola nanao izany akory, efa 2 taona izao. Sady mbola miaraka amina vehivavy hafa koa izy. Efa tratra foana nefa tsy miaiky hadisoana mihitsy. Te hisaraka aminy aho nefa mbola tena tia azy sady malahelo azy koa.
Paozy herinandro , ho an’ny vehivavy mpiasa birao
Amin’ny ankapobeny dia fitafiana mihaja hatrany no tokony hisaloran’ny vehivavy mpiasa birao. Kendrena hifanaraka amin’ny vaninandro sy ny toetrandro kosa anefa no mahalafatra izany. Indro àry ny soso-kevitra fiakanjo mandritra ny herinandro, ho an’ireo vehivavy mpiasa birao.
« Une vie sans chocolat est une vie à laquelle manque l'essentiel » . Marcia Colman et Frederic Morton
Paradisa kely, hono ny “chocolat” ary tsy misy vehivavy tsy mankafy azy. Ilay Amerikanina mpanao sary malaza, John G.
Ireo laharana antsoina, raha sendra ny loza …
Tsy mampilaza ny loza. Izany indrindra no tokony hitahirizana akaiky an’ireto laharana ireto, raha misy vonjy taitra tampoka.
CGM Analakely : Tambour Gasy manomboka amin’ny 7 ora sy sasany hariva. Paf: 5.000Ar